ဂျပန်မှ တန်ဖိုးနည်းဖုန်း နှင့် ဆင်းမ်ကဒ် | Working Friends
2017年11月27日 2018年1月29日 EM
မိမိမိသားစု အဆက်အနွယ်တော်များကို ဆက်သွယ်ဖို့ဆို ဖုန်းရှိမှဖြစ်မှာပါလေ
ဂျပန်မှာဆို ဘယ်လိုဖုန်း sim card ရှိတယ် ဘယ်လိုဝယ်ယူကြလဲ?
Docomo, au, Softbank ဆိုတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေပါ
ဒီကုမ္ပဏီတွေက ဖုန်းတွေမှာ sim lock ချထားလို့ ကိုယ့်နိုင်ငံပြန်တဲ့အခါ သုံးမရတတ်ပါဘူး။။ ဒါပေမဲ့ ယခုကတော့ ဝယ်ယူပြီး ရက်၁၀၀ပြည့်ပါက တရားဝင် lock ဖြေပေးတယ်လို့သိရပါတယ်။ ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီအလိုက်တော့ ဈေးနှုန်း၊ဝန်ဆောင်မှုကွာခြားပါတယ်။
ဝယ်ယူတဲ့အခါ ဖုန်းဟန်းဆက်နှင့် sim card တွဲဝယ်ရပြီး ဖုန်းသုံးခွင့်စာချုပ်၂နှစ်စာချုပ်ဆိုရပါတယ်။ကိုယ်ဝယ်ယူထားတဲ့ packageအလိုက် လစဉ်ငွေပေးချေရပါတယ်။
ဈေးကတော့ လစဉ်Yen 7000ကျော်ပါတယ်။
ဂျပန်ကို ကာလတိုပဲလာမယ် တစ်နှစ်အတွင်းပဲဆိုရင်တော့ အဆင်မပြေနိုင်ပါဘူး။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ ၂နှစ်စာချုပ်သက်တမ်း ဖျက်သိမ်းခ ပေးချေရလို့ပါ။ လက်ရှိ ၂ဝ၁၇ခုနှစ်မှာတော့ ဖျက်သိမ်းခ ယန်း ၁ဝ၂၆ဝ ကျသင့်ပါတယ်။
ဒါဆို ဖုန်းမဝယ်ရတော့ဘူးလား။ အိမ်နဲ့ဘယ်လိုဆက်သွယ်မလဲ?
အမေး ဂျပန်မှာ ဆင်းမ်ကဒ်တစ်မျိုးတည်း ဝယ်လို့ရပါသလား။
စာချုပ်သက်တမ်းမရှိဘဲ ဈေးသက်သက်သာသာ ဖုန်းဝယ်လို့ရပါသလား။
အဆွေတော်တို့ သုံးစွဲခ သက်သာစေမယ့် careerများကို မိတ်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။
sim card အမျိုးအစားကနေ စပြောရအောင်။
ဖုန်းsim card အမျိုးအစား ၃မျိုးရှိပါတယ်။
(၁) call function with data plan
（နံပါတ်၁ အမျိုးအစားကတော့ ကုမ္ပဏီအလိုက် စာချုပ်ဖျက်သိမ်းခ ကုန်ကျပါတယ်）
(၂) data plan & sms function
(၃) data plan only
with data plan OK OK OK
& sms function × OK OK
data plan only × × OK
sim cardပုံစံကတော့ အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း regular, micro, nano sim ကြိုက်တာဝယ်လို့ရပါတယ်။
လိုအပ်တာကတော့ ကိုယ့်မှာ sim free ဖုန်းရှိထားဖို့ပါပဲ (သုံးမရတဲ့ဟန်းဆက်လည်းရှိပါတယ်)
bill per month ယန်း၇၀၀၀ကျော် ယန်း၂၀၀၀ကျော်
period ၂နှစ် လပိုင်းမှ ၁နှစ်(သို့) ၂နှစ်
စာချုပ်ဖျက်သိမ်းခ 10,260 JPY ①အင်တာနက်ဖုန်း/sms sim　⇒ဖျက်သိမ်းခမပေးရ
②call function sim ⇒ယန်း၁သောင်းဝန်းကျင်
သုံးစွဲသူ ဂျပန်မှာ ၂နှစ်အထက် နေမည့်သူ
ဂျပန်မှာ ၃လအထက် ၊ ၂နှစ်အောက်နေထိုင်မည့်သူ
sim card တစ်မျိုးတည်း ဝယ်သုံးချင်သူ
နိုင်ငံခြားသားလည်းဝယ်ယူလို့ရနိုင်တဲ့တန်ဖိုးနည်း sim card
●　Line mobile
LINEမှာကတော့ LINE, Facebook, Twitter, Instargram စသဖြင့် လူမူကွန်ယက်app သုံးစွဲနိုင်ပြီး အင်တာနက်သုံးစွဲမှုအလိုက် data plan ကွာခြားပါတယ်။
LINE free plan, Communication plan (LINE,Facebook,Twitter,Instargram) စသည်
LINE free ဆိုရင် လစဉ် 1GB ၅ဝဝယန်း~
Communication plan ကတော့ LINEအပြင် Facebook,Twitter, Instargaram သုံးနိုင်ပြီး လစဉ် Yen 1110~ ဖြစ်ပြီး၊3GB plan,5GB plan, 7GB plan,10GB plan ရွေးနိုင်ပါတယ်။ အင်တာနက် အပြင် ရိုးရိုးဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်တဲ့ plan ဆိုရင်တော့ စသုံးပြီး ၁နှစ်အတွင်း စာချုပ်ဖျက်မယ်ဆိုရင်တော့ အခကြေးငွေ ကုန်ကျပါမယ်။
သုံးစွဲရင်တော့ အင်တာနက်ကနေ လျှောက်ထားသုံးစွဲနိုင်ကြောင်းပါ။
LINE ဖန်တွေအတွက်တော့ ဝမ်းသာစရာပေါ့။
●　Rakuten mobile
Rakuten ကလည်း ဆင်းမ်အမျိုးအစား၃ခုလုံးဝယ်ယူနိုင်ပြီး
ထူးခြားချက်ကလည်း ဈေးချိုတာပါတဲ့။ အင်တာနက်dataအလိုက် ဈေးကွာခြားပေမဲ့ လစဉ်ဖုန်းသုံးရင်း Rakuten ဈေးဝယ်ပွိုင့်လည်းရရှိမှာပါ။ လစဉ်ပေးချေတဲ့ငွေထဲက ယန်း100 တိုင်း 1ပွိုင့်ရပြီး တခြားဈေးဝယ်တဲ့အခါ ပွိုင့်သုံးနိုင်တဲ့စနစ်ပါ။ ဒေတာအကုန်မသုံးဖြစ်ရင် နောက်လမှာ ကျန်တဲ့ဒေတာ ပေါင်းပေးပါတယ်။ ဟန်းဆက်လည်းတွဲဝယ်နိုင်ပါသေးတယ်။ ဟန်းဆက်ကတော့ အန်းဒရွိုက်(Hwawei, Asus Zen series စသဖြင့် )ဖြစ်ပြီး အိုင်ဖုန်းလည်း သုံးနိုင်ပါတယ်။
Data only sim ကဒ်ပဲဆိုရင်တော့ နှစ်ချုပ်မလိုအပ်ပေမဲ့ call function plan ဖုန်းခေါ်ဆိုစနစ်ပါရင်တော့ အနည်းဆုံး တစ်နှစ်စာချုပ်ချုပ်နိုင်ပြီး ကာလအတွင်းစာချုပ်ဖျက်ရင်တော့ ၉၈ဝဝယန်းကျသင့်မှာပါ။
Rakutenဈေးဝယ်ချင်သူတွေအတွက်တော့ တစ်ချက်ခုတ် နှစ်ချက်ပြတ်ပဲပေါ့လေ။ (ကိုယ့်အတွေးနှင့်ကိုယ်)
တန်ဖိုးနည်းဆင်းမ်ကဒ်၂ဝ၁၆မှာ သုံးစွဲသူများကျေနပ်မှုမှာ ပထမရခဲ့ပါတယ်တဲ့ ＾＾
လစဉ်ဒေတာတွေကလည်း အမျိုးမျိုးရွေးချယ်နိုင်ပြီး၊ ဒီတစ်လနဲ့ဒေတာအကုန်မသုံးဖြစ်ရင် နောက်လမှာ ကျန်တဲ့ဒေတာ ပေါင်းပေးပါတယ်။ ဟုမ်းပေ့ခ်ျမှာလည်း အင်္ဂလိပ်လို ရှင်းပြထားတာရှိလို့ ဂျပန်စာ ခန်းဂျီးခက်လည်း စိတ်မပူပါနဲ့။
စစချင်းသုံးတဲ့အခါမှာတော့ ယန်း၃ဝဝဝ ပေးရပြီး ဒေတာသီးသန့် plan က ယန်း၉ဝဝကနေ စပါတယ်။
နောက်ထပ် ဈေးသက်သက်သာသာနဲ့ သုံးလို့ရတာကတော့ Ymobile ပါ။
●　Y mobile
နာမည်ကြီး Softbank ရဲ့ ကုမ္ပဏီခွဲဖြစ်ပြီး အင်တာနက်လိုင်းကောင်းမွန် ဈေးသက်သာတာကတော့ ထူးခြားချက်ပါ။
၂နှစ်စာချုပ်တော့ ချုပ်ရပေမဲ့ လစဉ် ယန်း၃ဝဝဝ လောက်နဲ့ ဒေတာ ၆GB လောက်အထိသုံးလို့ရတဲ့ အစီအစဉ်တွေရှိပါတယ်။စမတ်ဖုန်းဆိုရင် လစဉ်သုံးစွဲခ ၁၉၈ဝယန်း ကနေစပါတယ်တဲ့။
Ymobile ရဲ့ တခြားတန်ဖိုးနည်းဖုန်းနဲ့ကွာခြားတာကတော့ ရောင်းချတဲ့ဟန်းဆက်တွေထဲမှာ အိုင်ဖုန်းSE ကို တရားဝင်ရောင်းချတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ တခြား Hwawei လို တံဆိပ်လည်းရှိပြီး ကြိုက်နှစ်သက်တာသုံးနိုင်ပါတယ်။
Iphone, Samsung တို့လို နာမည်ကြီးတံဆိပ်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့သူအတွက်တော့ sim card ပဲဝယ်ပြီး သုံးလို့ရပါတယ်။ တန်ဖိုးနည်းsim card နဲ့တွဲရောင်းတဲ့ ဟန်းဆက်တွေကတော့ Hwawei, Asus Zen series စသဖြင့် ရှိပါတယ်။
ဖုန်းသုံးစွဲဖို့ လျှောက်ထားရင် ဘာတွေလိုအပ်မလဲ?
(၁) သက်သေခံကဒ်ပြား (နေထိုင်ခွင့်ကတ်ပြား ၊ နိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင်၊ အမြဲနေထိုင်ခွင့်ကတ် ၊ ကျန်းမာရေးအာမခံကဒ်၊ passport ၊ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် စသဖြင့်)
(၂) ခရက်ဒစ်ကဒ် (သို့) ဘဏ်ကဒ်
(၃) တံဆိပ်တုံး (သို့) လက်မှတ်
(၄) ဟန်းဆက်ဝယ်ယူပါက ဟန်းဆက်တန်ဖိုး
စတာတွေ ရှိထားရင် ဖုန်းဝယ်လို့ရပါပြီ။
ဖုန်းဆိုင်မှာ သွားဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့ မနက်စောစောသွားဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ လူရှုပ်တဲ့အချိန်ဆို ၂နာရီနီးပါးစောင့်ရလို့ပါ။ကိုယ့်အလှည့်ရောက်တော့လည်း ဆိုင်ဝန်ထမ်းတွေရှင်းပြတာတွေနဲ့ လျှောက်လွှာရေးတာက ၁နာရီလောက် ကြာပါတယ်။စုစုပေါင်း ၃နာရီပေါ့နော်။
မသွားခင် အချိန်သေချာညှိပြီးမှ အချိန်းအချက်ပြုကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ရှင်။
ဖုန်းဝယ်ပြီး မိသားစု မိတ်ဆွေတွေနဲ့ ဆက်သွယ်ကြပါစို့။
မိမိမိသားစု အဆကျအနှယျတျောမြားကို ဆကျသှယျဖို့ဆို ဖုနျးရှိမှဖွဈမှာပါလေ
ဂပြနျမှာဆို ဘယျလိုဖုနျး sim card ရှိတယျ ဘယျလိုဝယျယူကွလဲ?
Docomo, au, Softbank ဆိုတဲ့ ကုမ်ပဏီတှပေါ
ဒီကုမ်ပဏီတှကေ ဖုနျးတှမှော sim lock ခထြားလို့ ကိုယျ့နိုငျငံပွနျတဲ့အခါ သုံးမရတတျပါဘူး။။ ဒါပမေဲ့ ယခုကတော့ ဝယျယူပွီး ရကျ၁ဝဝပွညျ့ပါက တရားဝငျ lock ဖွပေေးတယျလို့သိရပါတယျ။ ဆကျသှယျရေးကုမ်ပဏီအလိုကျတော့ စြေးနှုနျး၊ဝနျဆောငျမှုကှာခွားပါတယျ။
ဝယျယူတဲ့အခါ ဖုနျးဟနျးဆကျနှငျ့ sim card တှဲဝယျရပွီး ဖုနျးသုံးခှငျ့စာခြုပျ၂နှဈစာခြုပျဆိုရပါတယျ။ကိုယျဝယျယူထားတဲ့ packageအလိုကျ လစဉျငှပေေးခရြေပါတယျ။
စြေးကတော့ လစဉျYen 7000ကြျောပါတယျ။
ဂပြနျကို ကာလတိုပဲလာမယျ တဈနှဈအတှငျးပဲဆိုရငျတော့ အဆငျမပွနေိုငျပါဘူး။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ ၂နှဈစာခြုပျသကျတမျး ဖကျြသိမျးခ ပေးခရြေလို့ပါ။ လကျရှိ ၂ဝ၁ရခုနှဈမှာတော့ ဖကျြသိမျးခ ယနျး ၁ဝ၂၆ဝ ကသြငျ့ပါတယျ။
ဒါဆို ဖုနျးမဝယျရတော့ဘူးလား။ အိမျနဲ့ဘယျလိုဆကျသှယျမလဲ?
အမေး ဂပြနျမှာ ဆငျးမျကဒျတဈမြိုးတညျး ဝယျလို့ရပါသလား။
စာခြုပျသကျတမျးမရှိဘဲ စြေးသကျသကျသာသာ ဖုနျးဝယျလို့ရပါသလား။
အဆှတေျောတို့ သုံးစှဲခ သကျသာစမေယျ့ careerမြားကို မိတျဆကျပေးသှားပါမယျ။
sim card အမြိုးအစားကနေ စပွောရအောငျ။
ဖုနျးsim card အမြိုးအစား ၃မြိုးရှိပါတယျ။
音声(おんせい)通話(つうわ)機能付き(きのうつき)格安(かくやす)SIM　<ဖုနျးချေါဆိုခွငျး+ အငျတာနကျ+sms>
（နံပါတျ၁ အမြိုးအစားကတော့ ကုမ်ပဏီအလိုကျ စာခြုပျဖကျြသိမျးခ ကုနျကပြါတယျ）
SMS機能付き(きのうつき)格安(かくやす)SIM　<အငျတာနကျ+ sms>
sim cardပုံစံကတော့ အားလုံးသိကွတဲ့အတိုငျး regular, micro, nano sim ကွိုကျတာဝယျလို့ရပါတယျ။
လိုအပျတာကတော့ ကိုယျ့မှာ sim free ဖုနျးရှိထားဖို့ပါပဲ (သုံးမရတဲ့ဟနျးဆကျလညျးရှိပါတယျ)
နိုငျငံခွားသားလညျးဝယျယူလို့ရနိုငျတဲ့တနျဖိုးနညျး sim card
LINEမှာကတော့ LINE, Facebook, Twitter, Instargram စသဖွငျ့ လူမူကှနျယကျapp သုံးစှဲနိုငျပွီး အငျတာနကျသုံးစှဲမှုအလိုကျ data plan ကှာခွားပါတယျ။
LINE free plan, Communication plan (LINE,Facebook,Twitter,Instargram) စသညျ
LINE free ဆိုရငျ လစဉျ 1GB ၅ဝဝယနျး~
Communication plan ကတော့ LINEအပွငျ Facebook,Twitter, Instargaram သုံးနိုငျပွီး လစဉျ Yen 1110~ ဖွဈပွီး၊3GB plan,5GB plan, 7GB plan,10GB plan ရှေးနိုငျပါတယျ။ အငျတာနကျ အပွငျ ရိုးရိုးဖုနျးချေါဆိုနိုငျတဲ့ plan ဆိုရငျတော့ စသုံးပွီး ၁နှဈအတှငျး စာခြုပျဖကျြမယျဆိုရငျတော့ အခကွေးငှေ ကုနျကပြါမယျ။
သုံးစှဲရငျတော့ အငျတာနကျကနေ လြှောကျထားသုံးစှဲနိုငျကွောငျးပါ။
LINE ဖနျတှအေတှကျတော့ ဝမျးသာစရာပေါ့။
Rakuten ကလညျး ဆငျးမျအမြိုးအစား၃ခုလုံးဝယျယူနိုငျပွီး
ထူးခွားခကျြကလညျး စြေးခြိုတာပါတဲ့။ အငျတာနကျdataအလိုကျ စြေးကှာခွားပမေဲ့ လစဉျဖုနျးသုံးရငျး Rakuten စြေးဝယျပှိုငျ့လညျးရရှိမှာပါ။ လစဉျပေးခတြေဲ့ငှထေဲက ယနျး100 တိုငျး 1ပှိုငျ့ရပွီး တခွားစြေးဝယျတဲ့အခါ ပှိုငျ့သုံးနိုငျတဲ့စနဈပါ။ ဒတောအကုနျမသုံးဖွဈရငျ နောကျလမှာ ကနျြတဲ့ဒတော ပေါငျးပေးပါတယျ။ ဟနျးဆကျလညျးတှဲဝယျနိုငျပါသေးတယျ။ ဟနျးဆကျကတော့ အနျးဒရှိုကျ(Hwawei, Asus Zen series စသဖွငျ့ )ဖွဈပွီး အိုငျဖုနျးလညျး သုံးနိုငျပါတယျ။
Data only sim ကဒျပဲဆိုရငျတော့ နှဈခြုပျမလိုအပျပမေဲ့ call function plan ဖုနျးချေါဆိုစနဈပါရငျတော့ အနညျးဆုံး တဈနှဈစာခြုပျခြုပျနိုငျပွီး ကာလအတှငျးစာခြုပျဖကျြရငျတော့ ၉၈ဝဝယနျးကသြငျ့မှာပါ။
Rakutenစြေးဝယျခငျြသူတှအေတှကျတော့ တဈခကျြခုတျ နှဈခကျြပွတျပဲပေါ့လေ။ (ကိုယျ့အတှေးနှငျ့ကိုယျ)
တနျဖိုးနညျးဆငျးမျကဒျ၂ဝ၁၆မှာ သုံးစှဲသူမြားကနြေပျမှုမှာ ပထမရခဲ့ပါတယျတဲ့ ＾＾
လစဉျဒတောတှကေလညျး အမြိုးမြိုးရှေးခယျြနိုငျပွီး၊ ဒီတဈလနဲ့ဒတောအကုနျမသုံးဖွဈရငျ နောကျလမှာ ကနျြတဲ့ဒတော ပေါငျးပေးပါတယျ။ ဟုမျးပခြေျ့မှာလညျး အင်ျဂလိပျလို ရှငျးပွထားတာရှိလို့ ဂပြနျစာ ခနျးဂြီးခကျလညျး စိတျမပူပါနဲ့။
စစခငျြးသုံးတဲ့အခါမှာတော့ ယနျး၃ဝဝဝ ပေးရပွီး ဒတောသီးသနျ့ plan က ယနျး၉ဝဝကနေ စပါတယျ။
နောကျထပျ စြေးသကျသကျသာသာနဲ့ သုံးလို့ရတာကတော့ Ymobile ပါ။
နာမညျကွီး Softbank ရဲ့ ကုမ်ပဏီခှဲဖွဈပွီး အငျတာနကျလိုငျးကောငျးမှနျ စြေးသကျသာတာကတော့ ထူးခွားခကျြပါ။
၂နှဈစာခြုပျတော့ ခြုပျရပမေဲ့ လစဉျ ယနျး၃ဝဝဝ လောကျနဲ့ ဒတော ၆GB လောကျအထိသုံးလို့ရတဲ့ အစီအစဉျတှရှေိပါတယျ။စမတျဖုနျးဆိုရငျ လစဉျသုံးစှဲခ ၁၉၈ဝယနျး ကနစေပါတယျတဲ့။
Ymobile ရဲ့ တခွားတနျဖိုးနညျးဖုနျးနဲ့ကှာခွားတာကတော့ ရောငျးခတြဲ့ဟနျးဆကျတှထေဲမှာ အိုငျဖုနျးSE ကို တရားဝငျရောငျးခတြာပဲဖွဈပါတယျ။ တခွား Hwawei လို တံဆိပျလညျးရှိပွီး ကွိုကျနှဈသကျတာသုံးနိုငျပါတယျ။
Iphone, Samsung တို့လို နာမညျကွီးတံဆိပျကွိုကျနှဈသကျတဲ့သူအတှကျတော့ sim card ပဲဝယျပွီး သုံးလို့ရပါတယျ။ တနျဖိုးနညျးsim card နဲ့တှဲရောငျးတဲ့ ဟနျးဆကျတှကေတော့ Hwawei, Asus Zen series စသဖွငျ့ ရှိပါတယျ။
ဖုနျးသုံးစှဲဖို့ လြှောကျထားရငျ ဘာတှလေိုအပျမလဲ?
(၁) သကျသခေံကဒျပွား (နထေိုငျခှငျ့ကတျပွား ၊ နိုငျငံခွားသားမှတျပုံတငျ၊ အမွဲနထေိုငျခှငျ့ကတျ ၊ ကနျြးမာရေးအာမခံကဒျ၊ passport ၊ ယာဉျမောငျးလိုငျစငျ စသဖွငျ့)
(၂) ခရကျဒဈကဒျ (သို့) ဘဏျကဒျ
(၃) တံဆိပျတုံး (သို့) လကျမှတျ
(၄) ဟနျးဆကျဝယျယူပါက ဟနျးဆကျတနျဖိုး
စတာတှေ ရှိထားရငျ ဖုနျးဝယျလို့ရပါပွီ။
ဖုနျးဆိုငျမှာ သှားဝယျမယျဆိုရငျတော့ မနကျစောစောသှားဖို့တိုကျတှနျးခငျြပါတယျ။ လူရှုပျတဲ့အခြိနျဆို ၂နာရီနီးပါးစောငျ့ရလို့ပါ။ကိုယျ့အလှညျ့ရောကျတော့လညျး ဆိုငျဝနျထမျးတှရှေငျးပွတာတှနေဲ့ လြှောကျလှာရေးတာက ၁နာရီလောကျ ကွာပါတယျ။စုစုပေါငျး ၃နာရီပေါ့နျော။
မသှားခငျ အခြိနျသခြောညှိပွီးမှ အခြိနျးအခကျြပွုကွဖို့ တိုကျတှနျးလိုကျပါတယျရှငျ။
ဖုနျးဝယျပွီး မိသားစု မိတျဆှတှေနေဲ့ ဆကျသှယျကွပါစို့။
Previous Previous post: When you rentaroom : ဂျပန်မှာ အိမ်ငှားတဲ့အခါ ဒါတွေကြည့်မယ်
Next Next post: အလုပ်ကြေညာစာ မှ ဂျပန်စာ ၏ အဓိပ္ပာယ်